Doorashada Soomaaliya: Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Gedo oo ka hor yimid qodobka quseeya gobolka – https://adanlove.wordpress.com
Doorashada Soomaaliya: Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Gedo oo ka hor yimid qodobka quseeya gobolka
Posted byAdan Hassan 28th May 2021 Posted inCaalamka, Gudaha, wararka maanta
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Gedo ayaa sheegay inay si aad ah u faaqidayaan qodobbada qaar ee lagu heshiisiinayo ka dib kulankii Golaha Wadatashiga Qaran ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Shirka oo ka dhacay Afisyooni ayaa waxaa ka soo baxay qodobbo muhiim ah oo ka mid ah doorashada in la qabto habsami u leh dhacdo ka dhacda gobolka Gedo, isla markaana si wanaagsan u garwadeen ka noqota Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka, Maxamed Xuseen Rooble.
Siyaasiyiinta qaar ee ka soo jeeda Gedo waxay dhaliil u muujiyeen qaabka loo marayo dib u heshiisiinta gobolka.
Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa maalintii ugu dambeysay baaq u diray bulshada gobolka Gedo in ay ku guuleysato, midnimada iyo wadajirka bulshada iyo kan maamul ee Jubaland.
Waxaa si taxaddar leh loogu daabacay “madaxweynaha dowlad-goboleedka Jubaland uu ugu yeeray qaybaha maamulka degmada Garbahaarey”.
Waxaa magacyadiisa lagu kala xulan doonaa Axmed Madoobe “u gudbin doono guddiga dib u heshiisiinta, si loo soo bandhigo Fududeynta Gudiga Farsamada ee 16ka Febraayo 2021 ee magaalada Baydhabo”.
Laakiin, urur la magac baxay ‘Golaha Raadinta Dhismaha Jubaland Loo Dhanyahay’ oo laga aasaasay gobolka Gedo ayaa aaminsan in doorashada madaxtinimada Soomaaliya ay ka dhaceyso maamulka Jubaland.
Waxay ka faa’iideysan doontaa xaddiga-xileedka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ay ku saabsantahay bisha Ogosto, wixii intaas ka dambeeya ayan u aqoonsan doonin madaxweynaha Jubaland ayna u doorteen in la doorto.
Afhayeenka golahaas, Cabdi Daahir Xasan oo BBC Somali la hadlay ayaa si gaar ah u sheegay in ay ku soo dhaweynayaan doorashada haddii ay dhacdo dhacdo Gedo, laakiin ay doorteen in dhacdo la xuso.
Muddadii madaxweynaha uu u ogolaaday oo ahayd labada sano, hadana ilaa hada waan ku faraxsanahay. Labada sanadood xitaa ogolaanshaheena laguma siin doono, xilalka ay hayaan, marka laga reebo, reer jubaland waxay diyaar u yihiin doorashada xor iyo xalaal ah, “ayuu yiri.
“Annaga waxaan rabnaa labada sano ee bisha siddeedaad ka tusaale ahaan, haddii ay dhammaato in loo dareero xorriyadda iyo xalaal ah,” ayuu sii raaciyay.
Muranka kuraasta “Somaliland” oo aan weli xal laga gaarin
Muxuu yahay khilaafka ka dhex taagan siyaasiyiinta Waqooyiga?
Wuxuu ururkan sheegay in loo diyaar garoobay nabadeyn iyo dib u heshiisiin ka dhacday gobolka oo dhan, laakin ay doorteen saddexda gobol ee maamul-goboleedka Jubaland ay ka qabsoonto dib u heshiisiinta loo dhan yahay, si loo ambaqaado doorashada maamulka.
“Waxaan rabnaa dib u heshiisiin la galo, xulo sax ahna la qabto, labadaas in ay is raacaan ayaan rabnaa,” ayuu yiri Cabdi-yare Garabroor.
Maxaa ku falanqeeyay qodobka gobolka Gedo ee ay isku dhaleen Golaha Wadatashiga Qaran?
Xafladdii lagu soo xiray shirkii
Shirka ayaa si qoto dheer leh loogu falanqeeyay, wuxuu kaloo ka hadlayaa xaalada guud ee gobolka Gedo ee ku wajahan horumarka iyo amniga.
Heshiiska waxaa loogu xusaa sidii hoos loogu qoray:
Golaha Wadatashiga Qaranka wuxuu ugu baaqayaa bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda, midnimada iyo wadajirka bulshada iyo kan maamul ee Jubaland.
Golaha Wadatashiga Qaranka wuxuu go’aansaday in Ra’iisul Wasaaraha Dhismaha Xukuumadda Federaalka uu garwadeen ka noqdo nabad gelyada iyo dib u heshiisiinta Gobolka Gedo si loo helo dhacdadii ugu dambeysay ee doorashada Gobolka Gedo.
Golaha Wadatashiga Qaran wuxuu go’aansaday abuuritaanka guddi dib u heshiisiin ah oo kooban oo ku saabsan Dowladaha oo ka hadlaya Dowlada Federaalka ah oo aan ku xirneyn Jubaland si ay u fuliso go’aanka Farsamo ee Baydhabo.
Guddigu wuxuu masuul ka yahay abuurista jawi xasilooni amni iyo badhtamaha isbedelka oo ku qabsoomi kara karto wada oggol ah oo ka hadlaya dhacdooyinka Magaalada Garbahaarey iyaga oo dhaw dhaw ula shaqeynaya Ra’iisul Wasaaraha Xarunteeda XFS.
Gudigu wuxuu soo jeedinayaa min labo Xubnood ee hogaamiyaha Gudoomiyaha iyo Gudoomiye kuxigeenka Degmada Garbahaareey isagoo u sheegaya bulshada qeybaheeda kala duwan.
Gudiga ayaa lagu magacaabaa magacaabayaa isbedelka 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa markii Madaxdu saxeexday saxan.
Madaxweynaha Dowlada Jubbaland ayaa soo dhaweysay xubnaha Maamulka Degmada Garbahaarey ee ay u gudbiyeen Gudiga dib u heshiisiinta si ay uga soo baxaan Gudiga Farsamada 16 February 2021 ee Magaalada Baydhabo.
Golaha Wadatashiga Qaranka wuxuu farayaa Gudiga dib u heshiisiinta in lagu soo daro dhameystirka abaabulka xasilinta Gobolka Gedo guud ahaan iyo tan jawiga qabsoomida doorashada Garbahaarey kala beddelka 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabaneysa magacaabista Guddiga.
Dhinaca amniga doorashada Garbahaarrey, goluhu wuxuu go’aamiyey:
In Booliska AMISOM la geeyo Magaalada Garba
haarey si ay u hubiyaan amniga Magaalada iyo goobta ay ka dhaceyso si wanaagsan,
Gudiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee ay ugu magacdareyso Jubbaland talo soo jeedin, kana shaqeyn doonta gudiga doorashada, ergada iyo murashaxiinta loogu tala galay in la helo ilaalo gaar ah (Close Protection) ee amnigooda si loo helo amni laysku halayn karo xaalada guud ee horumarka. .
Goluhu wuxuu go’aamiyey gudiga dib u heshiisiinta inuu usoo gudbiyo Xafiiska Raysalwasaaraha Xukuumada Federaalka ah ee abaabulka iyo jadwalka gogosha nabadeynta Gobolka iyo dhameystirka dhismaha Maamulka Gobolka Gedo, Laguna hirgaliyo sharciga 60 maalmood ee doorashada ka dib.
Maxay tahay Maamulka Falastiinxiritaanka dhaqdhaqaaqayaasha Daanta Galbeed?